Hagaha A-to-Z dan Qalabka Lacageedka Saaraajka (SSL) dan Ganacsiga Online
Dalam la dhiso xiriir waa baahan yahay kalsooni, taasina waa mid aad u xoogan oo midba midka ka mid ah labada dhinacba ay u badan tahay inaysan lahaan doonin. Ku kalsoonow internetka waa mid ka mid ah muhiimada ugu muhiimsan, gaar ahaan haddii xiriirkaasi yahay mid ganacsi; halkaasoo lacag laga helo. Xitaa ka qoto dheer taasi waa xaqiiqda ah Xogta waa dahab cusub, sidaa darteed lilin walba oo aan ku sameyno shabakaduhu waxay u baahan yihiin badbaado.
Jika Anda memiliki xidhiidhka aaminaadda ma fududa, laakiin waxaa jiray cadaadis sii kordhaya milkiilayaasha bogagga si ay u abuuraan jawi taas oo u ogolaanaysa isticmaalkooda inay dareemaan ammaan. Shahaadooyinka SSL waa hal hab oo muhiim ah oo arrintan ku sameeya, maaddaama ay hubiyaan dadka isticmaala di xiriirka ay leeyihiin boggaani uu yahay ammaan.
Dhamaadka isticmaalaha, dhammaantood waxay u baahan yihiin inay xaqiijiyaan tani waa ikon fudud oo lagu muujiyay shabakaddooda. Wixii milkiilayaasha bogagga, waa waxoogaa ka sii adag, baha maaha inay noqoto.
1 Maxay tahay Laydhka Laydhka (Lapisan Soket Aman) (SSL)?
2 Maxaan ugu baahanahay shahaadada SSL?
2.1 Cilifka Google
3 Sida toilet rakibo shahaadada SSL
3.1 Ku dhejinta SSL ee cPanel
3.2 Tidak ada SSL untuk ini dan juga Plesk
3.3 Cusboonaysii xiriirinta boggaaga internetka
3.4 Cusboonaysii xiriirada tilmaamaya boggaaga
3.5 Pengalihan Dejinta 301
3.6 Cusbooneysii CDN SSL
3.7 Khaladaadka shahaadada SSL dan e caadiga ah iyo xalal dhakhso ah
Maxay tahay Laydhka Laydhka (Lapisan Soket Aman) (SSL)?
SSL waa nidaam amaan ah oo hubinaya isticmaalaha di xiriirka ka dhexeeya kombuyuutarkooda iyo goobta ay booqanayaan ay tahay ammaan. Inta lagu jiro isku xirka, macluumaad badan ayaa ka dhaxeeya laba kombuyuutar, oo ay ku jiraan waxa pertarungan yaabo inay noqon karaan xog qarsoodi ah sida lambarrada kaararka deynta, lambarrada aqoonsiga isticmaalaha ama xitaa salam.
Xaaladaha caadiga ah, xogtan waxaa loo diraa qoraal toos ah, taas oo micnaheedu yahay di haddii xiriirku ay tahay di lagu xiro dhinac sadexaad, xogta la xaday. SSL waxay taasi ka hortagtaa tan adoo algoritma ogolaanaya enkripsi di loo isticmaalo inta lagu jiro isku xirka labada dhinac.
Calaamadaynta, ama calaamada cagaaran ee calaamaduhu waxay noqotey tilmaame saldo qaadaya dadka isticmaala di boggooda ay booqdaan ay ku qaadaan amnigooda si dhab ah.
Muujinta SSL dan kuabab daalacayaasha internetka ee kala duwan.
Maxaan ugu baahanahay shahaadada SSL?
Asal ahaan su’aasha ay tahay di la weydiiyo waa "Ma waxaan u baahan nahay shahaadada SSL".
Jawaabta caadiga ah waxay noqoneysaa ‘waxay ku xiran tahay’. Dhamaantiis, sabbta bogagga aan u baahnayn di la xakameeyo macluumaadka dhaqaale ee xasaasiga ah waxay u baahan yihiin di ay noqdaan kuwo amaan ah?
Nasiib darro, sida hore loo soo sheegey, da’da dijitalka ayaa loola jeedaa di lakala yareeyo lacagta kaashka ah, hackersaalku maanta ayaa sii kordhaya si ay u tagaan macluumaadka shakhsi ahaaneed.
Aqoonsiga tan, bilawga Juli 2018, Google menggunakan kuota calaamadeyn doonaa dhammaan bogagga HTTP caadiga ah ee aan aheyn mid aan amaan ahayn. Tani waa muhiim di la aqoonsado, maxaa yeelay waxay macnaheedu tahay di goobaha loo aqoonsado inay yihiin kuwo aan amaan ahayn Google ayaa laga yaabaa inay ku in dhacdo ganaax raadinta. Websaydhadu waxay ku faanaan gaadiidka iyo haddii aadan ka muuqan liiska Google, ka dibna ma heli doontid wax badan marka la eego taraafikada bogga.
Qiimaha melawan bilaabo $ 36,75 / sanad
Qiimaha melawan bilaabo $ 8,88 / sanad
Qiimaha laga bilaabo $ 14.95
Qiimaha melawan bilaabo $ 75,15 / sanad
Pertarungan Qiimaha bilaabo $ 175 / sanad
Qiimaha melawan bilaabo $ 149 / sanad
Qiimaha melawan bilaabo $ 59,99 / sanad
SSL bilaash ah: Aynu mengenkripsi
Kuwa idinka mid ah oo ku shaqeeya goobaha shakhsi ahaaneed ama hiwaayadaha, ama lilin kasta oo aan ganacsi ahayn, waxaa jira adigoon kuu ogolaanaynin di kale oo Google la aqbali karo.
Aan isku dayno waa CA aaminsan oo furan oo bilaash ah di la isticmaalo (). Sekarang, klik kali ini bixisaa shahaadooyinka domain-ama shahaadada DNS atau dari qorsheyneynin di ay kordhiso tan OV ama EV. Tani waxay ka dhigan tahay di shahaadooyinkoodu kaliya ay ansixin karaan lahaanshaha iyo ma aha shirkadda heysata. Haddii aad tahay goob ganacsi, taasi waa caqabada ugu weyn.
Enkripsi Aynu horay ugu qaabaynay shirkadaha martigeliya qaarkood (tusaale ahaan- SiteGround iyo GreenGeeks). Haddii aad qorsheyneyso inaad raacdo Aan Enkripsi SSL Gratis, waxa ugu wanaagsan inaad martigeliso mid ka mid ah martigaliyayaasha websaydhkan.
Heerka Loo Feejigno SSL waa bilaash dhamaan xisaabaadka martigelinta iyo baabuurta lagu rakibay dhammaan meelihii leh SiteGround.
Isticmaalayaashu waxay u beddetik bulan yang lalu HTTPS (iyagoo adeegsanaya Aynu Enkripsi di Siteground) xoogaa yar oo gujiyo ah.
Jika Anda ingin menggunakan Heashka ah Waxaan ku dhajinaynaa shahaadooyinka SSL ee SiteGround, gali cinwaanka> Amniga> Manajer SSL / TLS> Sertifikat (CRT).
Laga bilaabo Maarso 29, 2018, Aynu Hirgelin SSC SSC waxaa sidoo kale ku jira (bilaash) dhammaan xisaabaadka martigelinta ee SiteGround. Tani waxay noqonaysaa ilaaliye waqti loogu talogalay milkiilayaasha goobta ku jira oo ku shaqeynaya dhowr sub-domain (mail.domain.com, billing.domain.com, iwm). Lilin badan ka baro dib-u-eegga boggaaga.
Sida toilet rakibo shahaadada SSL
Ku dhejinta SSL ee cPanel
Di bawah ‘Options’ fursadaha, guji ‘SSL / TLS Manager’
Di bawah ‘Instal oo Kelola SSL’, ada ‘Situs Maaree SSL’
Nuqul shahaadadaada shahaadada ah oo ay ku jiraan – BIXINTA SHARCIYEYSAN– iyo – SHARCIYEED- oo ku dheji "Shahaadada: (CRT)".
Guji ‘IsiOtomatis Berdasarkan Sertifikat’
Semua orang yang melihat jajab saar silsiladda shahaadooyinka dhexdhexaadka ah (Bundel CA) sanduuqa hoos yimaada Sharciga Maamulka Shahaadada (CABUNDLE)
Riix ‘Shahaadada ku rakib’
* Xusuusin: Haddii aadan isticmaalin cinwaan IP ah oo aad udheeraad ah waa inaad mid ka mid ah ka doorato menu IP-ka.
Tidak ada SSL untuk ini dan juga Plesk
Tandai bogga Websaydhada & Domain-pintu untuk qaybta aad jeceshahay inaad ku dhejiso shahaadada.
Riix ‘Raadinta Goobahaaga’
Marka la eego qaybta ‘Unggah File Sertifikat’, tambah ‘Telusuri’ oo dooro shahaadada iyo calaamadaha CA ee loo baahan yahay.
Riix ‘Faylal soo dir’
Dib ugu noqo ‘Websaydhada & Xerooyinka ‘ka dibna guji’ Dejinta Marti-gelinta ‘ee qaybta aad ku dhejinayso shahaadada.
Di bawah ‘Keamanan’, Anda dapat menemukan lebih lanjut tentang hoos-hoosaadka aad u doorato shahaadada.
Hubso sanduuqa ‘Dukungan SSL’ dan disimpan.
Hubi inaad riix ‘OK’ dan a badbaadiso isbeddel
Jika Anda menyukai lagu ini, lagu guuleystey, waxaad isticmaali kartaa tan qalab ansixin SSL lacag la’aan ah.
Cusboonaysii xiriirinta boggaaga internetka
Semua orang melihat blog di internet dan memilih internetka wax dengan mudah, jangan lupa untuk mencoba HTTP. Sida iska cad waxay u baahan yihiin di la cusbooneysiiyo xidhiidhada HTTPS. Hada dhowr tallaabo waxaan ku tusinaynaa hab aad adigu u sameyso adigoo isticmaalaya farsamo dib u habeyn.
Si kastaba ha ahaatee, waa habka ugu wanaagsan ee lagu cusbooneysiin karo xidhiidhadaada gudaha ee HTTP ilaa HTTPS.
Haddii aad leedahay bog yar oo leh bogag dhowr ah oo aan muddaba qaadan. Jika Anda memiliki hadadi aad leedahay boqolaal rog, waxay qaadanaysaa da’da si aad uga fiicnaan laheyd adoo isticmaalaya qalab si aad u baratid tan si aad u badbaadisid wakhti. Haddi goobtaada ay ku socoto xogta, samee raadinta xogta iyo bedelida isticmaalka warqadan bilaashka ah.
Cusboonaysii xiriirada tilmaamaya boggaaga
Tandai bahwa Anda memiliki HTTPS memiliki lebih dari satu shabakadaha dan dibedda oleh orang-orang di mana Anda memilih lilin HTTP. Waxaan samayneynaa di mana Anda tahu bagaimana tallaabooyinka, laakiin haddii situs web lilin ah oo dibadda ah oo aad adigu koontarooleyso profil ka dibna waad soo cusbooneysiin kartaa URL si aad u tilmaamto nuqulka HTTPS.
Tusaalooyin wanaagsan oo kuwan ka mid ah waxay noqon doonaan farsamooyinkaaga warbaahinta bulshada iyo liisaska liisaska meesha aad ku leedahay bog bog oo kuxiran xukunkaaga.
Pengalihan Dejinta 301
Saya memiliki si dheji jadwalkaaga iyo haddii aadan kalsooni ku qabin nooca noocaas ah markaa waa hubaal wakhti aad ku heli karto gargaar khibradeed. Waa arrin toos ah oo aan waqti badan qaadanin xaqiiqda dhabta ah, laakiin waxaad dan baahan tahay inaad ogaato waxa aad sameyneyso.
Iyadoo 301 dibor hagaajineyso waxa aad sameyneyso waxay u sheegeysaa Google di bogga gaar ah si joogto ah loogu guuray cinwaan kale. Xaaladdan waxaad u sheegeysaa Google di lilin kasta oo HTTP ah oo ku yaal boggagaaga ay hadda yihiin HTTPS sidaa daraadeed waxay Google u direysaa bogagga saxda ah.
Inta badan dadka isticmaala Linux Linux martigelintaan waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo faylka .htaccess (kode eeg kore) sida ku xusan talooyinka Apache).
Redirect ServerName www.example.com "/" "https://www.example.com/"
Cusbooneysii CDN SSL
Tani dhab ahaantii waa tallaabo ikhtiyaari ah maxaa yeelay maaha qof kasta oo isticmaala CDN. CDN waxay u taagan tahay shabakadda soo gudbinta Macluumaadka oo waa juquraafi ahaan loo server qaybiyey oo kaydiya nuqulada faylashaada shayakadaada waxayna u soo bandhigi doonaan martidaada ka timid serverka juqura haji.
Sidoo kale horumarinta waxqabadka, CDN waxay sidoo kale bixin kartaa nabadgelyo wanaagsan sababta oo ah bay’aduhu waxay kormeeraan oo aqoonsadaan taraafikada xun xun waxayna joojiyaan inay gaaraan boggaaga.
Tusaale ahaan CDN caan ah waa Cloudflare.
Jika Anda memiliki ahaatee, kaliya weydii shirkada martigelinta haddii aad isticmaalayso CDN. Haddii aanad fiicnayn, u gudub talaabada xigta.
Apakah Anda pernah membeli CDN atau menemukan cara mendaftar di mana Anda dapat membeli SSL-kaaga dan ay nidaamka CDN atau aqoonsadaan.
Khaladaadka shahaadada SSL dan e caadiga ah iyo xalal dhakhso ah
Shahaadada 1- SSL dan dari karin
Ku dhowaad dhammaan daraasadaha ku jira isticmaalka baahsan sida Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Iyo Apple Safari waxay ku dhistay bakhaarro loo isticmaalo di lagu aqoonsado shahaadooyinka SSL-yada la aaminsan yahay.
Hadad aad hesho farriin sheegaysa di goobta uu leeyahay shahaado aan la aamini karin, jimicsi taxaddar sida tan oo macnaheedu yahay di shahaadada imika aysan saxeexin CA.
2 – Shahaadada SSL dan dhexdhexaad ah ayaa maqan
Qalabkan badanaa waxaa keena shahaadada SSL-da qaldan ee lagu rakibay. Khaladaadka ke lagu jiro nidaamka rakibida waxay keeni kartaa khaladaadka SSL-ga qaar ka mid ah. Waa inuu jiraa ‘silsiladda kalsoonida’taasoo micnaheedu yahay di dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah ee geeddi-socodka saxiixa ay tahay inay baxaan.
Haddi aad tahay mulkiilaha bogga oo aad la kulantid qaladkan, iskuday di aad tixraacdo qaybta aan soo gudbiyay ”.
3 – Dhibaatooyin la leh shahaadooyinka saxiixa
Jika Anda menggunakan SSL SSL, coba lakukan ini dengan milkiilayaasha bogagga waxay abuuraan Shahaadooyin SSL-kooda. Tani waa suurtogal, laakiin ha sameynin lilin isbeddel ah tan iyo markii aysan saxeexin CA. Waqti keli ah ee shahaadooyinka adalah-saxiixa atau badan tahay di la isticmaalo waa goobo imtixaan ama horumarineed. Meelaha ay ku qoran yihiin shahaadooyinka adalah-saxiixan looma muujin doono inay yihiin ammaan.
4 – Khaladaadka Macmiilka ee Mixed
Tani waa dhibaatada qaabaynta. Shahaadooyinka SSL dan shaqeynaya, bog kasta iyo faylka ku yaal boggaaga waa inuu ahaado HTTPS. Tan waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya bogagga, laakiin sidoo kale sawirada iyo dokumantiyada. Hadad bogga kaliya uusan aheyn HTTPS, goobta waxay la kulmi doontaa qalad isku dhafan oo dib ugu noqoshada HTTP.
Jika Anda belum menemukan dhibaatooyinkan, hubi di xiriiradaada dhamaantood la cusbooneysiiyay xidhiidhada HTTPS.
Dhammaadka maalinta, shahaadooyinka SSL waa xaalad guuleysi leh. Haa, waxaa laga yaabaa di lagu qasbo ganacsiyada waaweyn sida Google, laakiin waxaa jira runtii aad u yar.
Qiimaha yaryar, waxaad dan xaqiijin kartaa macaamiisha ammaanka ee macluumaadka iyo asturnaanta. Macaamiisha dhinaca kale, waxay dibo soo ceshan yang lalu rumaysiga teknoolajiyada digital-ka ah, oo ah mid aad ah u cakiran Hacker, Spamers iyo kuwa kale ee loo yaqaan ‘Cybercriminals’.
eCommerce waa mid ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee dhaqaalaha dijitalka waxaana uu gacan ka geystey kor u qaadista ganacsiga xudduudaha xuduudaha xuduudaha hadda ka hor. Jika Anda suka xogta ammaan iyo ammaan, mulkiilayaasha boggaga shakhsi ahaaneed ayaa gacan ka geysan kara ammaanka internetka sidoo kale.
Ugu dambeyntii, marka aad dooranayso SSL, isku hari inaad iska ilaaliso isha ku hayso isha qiimaha oo aad samayso sida ican fi mar si aad mar walba ugu noqoto hal erey oo fudud marka aad dareem lumis ama wareersan; Aaminto.
Dans la dhiso xiriir waa u baahan yahay kalsooni, taasina waa mid aad u
Hagaha A-to-Z ee Qalabka Lacageedka Saaraajka (SSL) i Ganacsiga Online
In la dhiso xiriir waa u baahan yahay kalsooni, taasina waa mid aad u
La dhiso xiriir waa u baahan yahay kalsooni, taasina waa mid aad u xoogan
Hagaha A-to-Z ee Qalabka Lacageedka Saaraajka (SSL) e Ganacsiga შემოსული
CodeLobster PHP izdanje: IDE Inta Badan ee
როგორ გამოვაქვეყნოთ თქვენი წიგნი # 3: 5 გზები, რომ გაყიდოთ თქვენი თვითრეკლამა წიგნი
Suosituimmat Themâu Siopio Chwaraeon 10 Ar gyfer Lansio Presenoldeb Ar-lein sy’n ennill Gwerthu
Kuinka käyttää 7-sääntöä uusien asiakkaiden saamiseksi
Me ya sa (da kuma yaya) zuwa alamar profitwanci Alamar hyödywancin ku: Abinda ke Nuna Nawa + Abubuwanda ke amfani da shi daga masu lauya
Verkkokortti: 10 kuukautta sitten PayPal-pelikortti
क्या किंडल पुस्तकें ब्लॉगर्स के लिए आय का एक और स्थिर स्ट्रीम प्रदान कर सकती हैं?
Freŝaj Ideaj Komencantoj di Via Blogo nel 2015
Συνηθισμένα σφάλματα γραμματικής και πώς να τα αποφύγετε στο ιστολόγιό σας
Rezon ki fèe 5 Poukisa yon Sim City jwè ta ka pwochen manadjè medya ou
49 Αποδεδειγμένα δεδομένα συμβουλές σχετικά με τον τρόπο λήψης περισσότερων Retweets
Casi di studio: 20 modi per aumentare i tassi di conversione del sito Web
Mörg notkunartilfelli VPN: Hvernig VPN getur verið gagnlegt
დააწკაპუნეთ Twitter Bios, თუ გსურთ გამოიყენოთ Oooh sy Aahh
Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny मुफ्त समीक्षा शब्द
Koliko košta hosting hostinga u 2020. godini?
מלמולו א 25 קולמבה מילאנדו יבווינו
30+ אתרים הטובים ביותר המציעים תמונות ותמונות חינם של בלוגים עבור בלוגים
Entretien sur la conception Web: Q&A avec Ryan Pierson, responsable du partenariat RocketTheme
I migliori siti web personali Ive Amboona (uye Nzira Yokugadzira Yako)
Tlhahlobo ea Litsebi: Debbie Bookstaber -lehti on kirjoitettu kokonaan Sechaba – Molemo ja Thusa ba-Blogger
קליאו טוויטר ביוס izay hahatonga anao handha Oooh sy Aahh